इन्स्टाग्राम विज्ञापनहरूको लागि थप मनपर्दोहरू प्राप्त गर्दै: अनुसरण गर्न Best उत्तम उत्तम अभ्यासहरू Martech Zone
इन्स्टाग्राम विज्ञापनहरूको लागि अधिक मनपर्दो प्राप्त गर्दै: अनुसरण गर्नका लागि Best उत्तम अभ्यासहरू
सोमबार, अक्टोबर 21, 2019 बुधबार, अक्टोबर 14, 2020 Douglas Karr
प्रतिस्पर्धा यद्यपि प्लेटफर्ममा तातो हुँदैछ, र ब्रान्डहरू तिनीहरूको इंस्टाग्राम विज्ञापन अभियानहरूबाट अधिक फाइदा लिन खोज्दैछन्। एउटा विधि ब्रान्डले सगाई गेज गर्न प्रयोग गर्दैछ, र ब्रान्ड मान थप मनपर्दोहरू प्राप्त गर्दैछ। हामी रणनीतिहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौं जुन तपाइँको ब्रान्ड खातामा तपाइँको विज्ञापनहरूको लागि प्राप्त गर्न सक्ने मनपर्दो संख्यालाई सुधार गर्न सक्छ।
इन्स्टाग्राम विज्ञापनको लागि अधिक मनपर्दो प्राप्त गर्नुहोस्
मनपर्नेहरू इंस्टाग्राममा कुनै पनि अभियानको सफलताको लागि महत्वपूर्ण छन्। यसले प्रयोगकर्ताहरूबाट सment्लग्नता र आशय देखाउँदछ, यसको मतलब यो हो कि तपाईं सहि दिशामा चल्दै हुनुहुन्छ। त्योले भन्यो, मान्छेलाई तपाईको पोष्ट मन पराउनु गाह्रो हुन सक्छ, विशेष गरी यदि तपाई एक ब्रान्ड नै हुनुहुन्छ जसले भर्खर सुरू गरिरहेको छ। हामीले केहि तरिकाहरू हाइलाइट गरेका छौं जसले तपाईंलाई तपाईंको ब्रान्डको लागि मनपर्दो संख्या अधिकतम प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
१. उच्च-गुणवत्ता फोटो र भिडियोहरू साझेदारी गर्नुहोस्
तपाइँको खातामा मनपर्दो लाई ग्यारेन्टी दिनको उत्तम तरिका भनेको तपाइँले उच्च गुणवत्ताको सामग्री पोष्ट गर्नुभयो। यो विशेष गरी विज्ञापनको मामलामा सत्य हो किनकि ती तपाईका अनुयायीहरू बाहेक अरू धेरै मानिसहरूले देख्नेछन्। धेरै जसो ब्रान्डले धेरै विज्ञापन लिन्छन् निश्चित गर्नका लागि कि उनीहरूको विज्ञापनले धेरै टाउकोहरू परिवर्तन गर्दछ। राम्रोसँग कार्यान्वयन गरिएको विज्ञापन अभियानमा भाइरल हुने धेरै संभावनाहरू छन्, ब्रान्डलाई लाइमलाइटमा फ्याँक्दै। यहाँ छ उदाहरण को लागी इन्स्टाग्राम मा एक उच्च गुणवत्ता विज्ञापन को लागी
२. राम्रो क्याप्शन सिर्जना गर्नुहोस्
जबकि इन्स्टाग्रामको मुख्य आकर्षण भनेको यो एक मनमोहक छवि प्लेटफर्म हो, क्याप्शन एक दोस्रो पछि आउँछ जब उनीहरूको सृजनात्मकता प्रदर्शन गर्ने ब्रान्डको कुरा आउँछ। राम्रो क्याप्शन ब्रान्ड जागरूकता र सहायता ब्रान्ड रिकल वृद्धि गर्न पाइन्छ। साथै, क्याप्शन तपाईंको पोष्टको एक पक्ष हो जुन छवि पर्याप्त छैन भने तपाईं थप लाइकहरू प्राप्त गर्न पछाडि झर्न सक्नुहुन्छ। A आकर्षक क्याप्शन अनुयायीहरूलाई टिप्पणी गर्न पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ, जसले स engage्लग्नतामा सुधार ल्याउन सक्छ।
C. सीटीए र ह्यासट्याग बुद्धिमानीपूर्वक प्रयोग गर्नुहोस्
ह्यासट्यागहरू र CTA हरू (कार्य गर्न कल) मानिसहरूलाई संलग्न गराउनमा उत्तम छन्, तपाईंले तिनीहरूलाई सहि प्रयोग गर्नुभयो भने। ह्यासट्याग यस को एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो Instagram सगाई रणनीति। तपाईंको विज्ञापनहरू नजिकका मानिसहरूलाई प्राप्त गर्न, तपाईंको इन्स्टाग्राम विज्ञापनहरूका लागि स्थानीय ह्यासट्यागहरू प्रयोग गर्नुहोस्। साथै, तपाईं सक्नुहुन्छ लोकप्रिय ह्यासट्यागमा हेर्नुहोस् तपाइँको कोशिस मा तपाइँको खाता को लागी अधिक अनुयायीहरु पाउन।
CTA हरू तपाईंको ईन्स्टाग्राम खातामा निर्णायक कार्यवाही गर्नका लागि मानिसहरूलाई कोक्स गर्न प्रयोग गरिन्छ। CTAs प्रासंगिक हो, र तपाईंले तिनीहरूलाई कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने बुझ्नु पर्छ। मानिसहरूले केवल सीटीएमा मात्र पहुँच गर्न सक्दछन् यदि त्यहाँ उनीहरूसँग केही मूल्यवान चीज छन् जुन तपाईंले तिनीहरूलाई प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ। CTAs प्रयोग गर्दा जोडतोडको भावना सिर्जना गर्नु राम्रो रणनीति हो। वाक्यांशहरू मनपर्दछ अधिक पत्ता लगाउन अब क्लिक गर्नुहोस्, सीमित समयको लागि मात्र उपलब्ध व्यक्ति क्लिक गर्न राम्रो उदाहरणहरू हुन्।
Op. इष्टतम पोष्टिंग टाइमहरू फेला पार्नुहोस्
तपाईंको खातामा बढी सment्लग्नताको रेखाचित्रको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यो सुनिश्चित गर्नु हो कि तपाईंको विज्ञापन पोस्टिंग समय तपाईंको अनुयायीहरू सबैभन्दा सक्रिय छ सँग मेल खान्छ। इन्स्टाग्राममा कुनै पनि "सही समय पोस्ट गर्ने" छैन - यो व्यवसाय र लक्षित स्थानका प्रकारहरूमा भिन्न हुन्छ। त्योले भन्यो, उपभोक्ताहरूलाई आकर्षित गर्न थम्बको सामान्य नियम अवधिभरि पोष्ट गर्नुपर्नेछ अफ-काम घण्टा खाजा जस्तो एक दिनमा (11: 00 बिहान 1: 00 अपरान्ह) वा काम पछि (7: 00 अपरान्ह 9: 00 अपरान्ह)। त्योले भन्यो, तपाईंले पनि आफूले लक्ष्य गरेको स्थानलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ। त्यहाँ इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्न समयको बारेमा पनि अधिक विस्तृत पोष्ट पनि छ Hubspot कि तपाईं जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
Cross. क्रस-प्लेटफार्म पदोन्नति
इन्स्टाग्राम क्रस-प्लेटफर्म पोष्टिंगका लागि उपयुक्त छ, जसले यसलाई उत्कृष्ट प्लेटफर्म बनाउँदछ तपाइँको व्यवसाय लाई बढावा दिनुहोस् खुल्ला तपाईं आफ्नो इन्स्टाग्राम फीड फेसबुक र ट्विटर जस्ता अन्य प्लेटफर्महरूमा अपडेटहरूको लागि स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो विशेष गरी तपाईंको पक्षमा काम गर्न सक्दछ जब तपाईं प्रतियोगिताहरू आयोजित गर्दै हुनुहुन्छ। व्यक्ति विजयी प्रतियोगिताहरू मन पराउँछन्, र त्यसैले अन्य सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूमा शब्द प्राप्त गर्दा तपाईंलाई तपाईंको ब्रान्डको लागि अधिक प्रदर्शनीमा मद्दत गर्दछ। साथै, धेरै ब्रान्डले उनीहरूको बायोमा यूआरएल प्रयोग गर्दछ उनीहरूको फेसबुक पेजमा लिंक गर्न जहाँबाट तपाईं तिनीहरूलाई अन्य यूआरएलहरूमा निर्देशित गर्न सक्नुहुनेछ।
Like. सम्बन्धित Niches मा लाइक र टिप्पणी गर्नुहोस्
अर्को तरीका जुन तपाईं समान खातामा सम्बन्धित खाताहरूको साथ ब्याज उत्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं तिनीहरूको खातामा तिनीहरूसँग संलग्न हुन समय लिनुहुन्छ। इन्स्टाग्रामले सँधै साधारण नियममा काम गरेको छ - सगाईको लागि सगाई। त्यसोभए जब तपाइँ तिनीहरूको खातासँग अन्तरक्रिया गर्नुहुन्छ, तपाइँ उनीहरूबाट पनि स drawing्लग्नताको संभावनाहरू बढाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईं त्यहाँबाट आफ्नो खातामा रुचि अधिक अनुयायीहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, यसको मतलब लामो समयको लागि तपाईंको खाताको लागि अधिक मनपर्दोहरू।
An. इन्स्टाग्राम सage्लग्न पोडमा समावेश हुनुहोस्
पोड भनेको व्यक्तिहरूको समूह बीचमा सीधा सन्देश हो जो इन्स्टाग्राममा समान स्थानमा छन् र उनीहरूको अनुयायीहरू, मनपर्दछ, वा हेराई बढाउन चाहन्छ। कुनै पोडको आधारभूत आधार यो हो कि जब कुनै पोडको सदस्यले नयाँ सामग्री पोस्ट गर्दछ, पोडमा व्यक्तिहरू यसमा संलग्न हुने आशा गरिन्छ। यसले पोष्टलाई तिनीहरूको फलोडर फिडहरूको शीर्षमा जान मद्दत गर्दछ। जबसम्म इन्स्टाग्रामले उनीहरूको एल्गोरिथ्ममा परिवर्तन गर्यो तब सम्म मानिसहरू पोडहरू प्रयोग गर्दैछन्। अद्यावधिक प्रदर्शन कालक्रम अनुसार भन्दा लोकप्रियता अनुसार पोष्ट गर्दछ।
Your. तपाईका विज्ञापनहरू दृश्यात्मक इन्ट्याकि Make बनाउनुहोस्
तपाइँको विज्ञापनको लागि अधिक मनपर्दो प्राप्त गर्ने सब भन्दा प्राकृतिक विधिहरू मध्ये एक सामग्रीको गुणस्तरमा केन्द्रित गर्नु हो। तपाईंले आफ्नो विज्ञापनहरूसँग उनीहरूसँग पर्याप्त गुण भएको कुरा निश्चित गर्नु आवश्यक छ, त्यसैले तिनीहरू बाँकी सामग्रीबाट अलग रहन। यसले दर्शकहरूको ध्यान खिच्नको लागि रचनात्मक र ज्वलंत चित्रको प्रयोग समावेश गर्दछ। ब्रान्डले यो कसरी गर्छ भन्ने एउटा उदाहरण -
स्टारबक्सको एक थियो #FrappuccinoHappyHour अभियान जो भाइरल भयो। उनीहरूले यो उज्यालो र colorsहरू र पृष्ठभूमिको रचनात्मक प्रयोगको साथ पूरा गरे जुन उनीहरूका अनुयायीहरूले मनपराउँथे।
रैपिंग अप - सबैले इन्स्टाग्राममा मनपर्दो प्राप्त गर्न सक्दछन्
अनुयायी अन्तर्क्रिया कुनै श doubt्का बिना इन्स्टाग्रामको एक ठूलो अंश हो, र इन्स्टाग्राम लाइकहरू सबैभन्दा सामान्य विधि हुन् जुन मानिसहरूले ब्रान्डलाई उनीहरूले उनीहरूको सामग्रीहरू मन पराउँछन् भनेर बताउँदछन् (कुनै प pun्ग इरादा छैन!) उनीहरूको सामग्री। ब्रान्डले विज्ञापनमा पर्याप्त रकम खर्च गर्दछ, र कहिलेकाँही उनीहरू काम गर्न सक्षम हुँदैनन्।
जबकि विज्ञापन को लागी अधिक मनपर्दो प्राप्त गर्न जटिल छैन, यो कुरा सही बनाउन निश्चित गर्न तपाईले केहि पक्षहरुमा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्छ। पोस्ट गर्ने समय, छवि गुणस्तर, र क्याप्सन जस्ता चीजहरू विचार गर्न आवश्यक चीजहरू हुन् जुन तपाईं आफ्ना अनुयायीहरूलाई जवाफ दिन चाहनुहुन्छ भने। यी सुझावहरूले तपाईंको इन्स्टाग्राम विज्ञापन अभियानहरूको अधिक फाइदा लिनको लागि केहि विचारहरू दिनुपर्दछ। साझा गर्नुहोस् के तपाईं कसरी राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न आफ्नो विज्ञापन रणनीति रिडेम्प गर्न सक्षम हुनुहुन्छ।
जान्नु पर्ने कुराहरु फेसबुकमा बचत गरिएको दर्शकको नक्कलको साथ सुरू गर्न
डरलाग्दो ... यस वर्ष Halloween 8.8 बिलियन खर्च हुनेछ